Tari-dalana Toriteny Alahady 26 Novambra 2017 (Alahady 24 manaraka ny TRINITE) – Zanaky ny Fiangonana Loterana Malagasy (ZFLM)
Tari-dalana Toriteny Alahady 26 Novambra 2017 (Alahady 24 manaraka ny TRINITE)
Miarahaba antsika rehetra amin’ny anaran’i Jesosy Kristy Tompo. Indro atolotra anareo indray ny tari-dalana momba ny texte izay hotoriana manerana ny sahan’ny FLM amin’ny Alahady faha 26 Novambra 2017 ho avy izao (Alahdy faha XXIV Manaraka ny Trinite)
Alahady farany amin’ireo Alahady rehetra manaraka ny Trinite ity faha 26 Novambra 2017 ity. Azo lazaina koa hoe “Alahady izay mamarana ny taom-piangonana” izany. Araka izany dia manondro koa ny fiafaran’ny fiaimpiainan’ny zanak’Andriamanitra ny hafany: “ny fanomezana ny fiainana mandrakizay amin’ny alalan’ny fananganan’i Jesosy tenan’ny mino amin’ny maty amin’ny andro farany”. Ahoana àry no handraisany izany fanomezan-dehibe izany?
Foto-kevitry ny hafatr’i Jesosy ao amin’ity Filazantsara fahefatra ity ny hoe “Izay MINO Azy no hanana ny fiainana mandrakizay” (ampit. Jao 3:16; etc.). Ny “fiainana mandrakizay” no fomba fitenin’i Jaona izay mitovy hevitra amin’ny hoe “Fanjakan’ Andriamanitra/lanitra” ao amin’ny Synoptika. Fiainan’Andriamanitra na fiainana ao amin’izay misy an’Andriamanitra izany. Ny hananan’izay MINO an’i Jesosy izay nirahiny hitondra izany “fiainana mandrakizay” izany no sitrapon’ny Ray. Miverimberina ao anatin’ity Jaona toko faha 6 ity matetika ny matoanteny hoe MINO (ohatra: mba hinoanareo izay nirahina, and. 29; izay mino Ahy tsy mba hangetaheta intsony, and. 35; izay mino ahy no manana ny fiainana mandrakizay, and. 47). Iza àry no mino? Mampiasa voambolana samihafa I Jaona hamaritany izany: Ny MINO Azy dia izay MANATONA Azy (and. 35, 37). Eto ny hoe “manatona” dia tsy milaza ny ezaka izay ataon’ny olona fa manindry kosa ny fisarihan’i Jesosy izany olona izany: voasariky Jesosy hanatona Azy ny olona izay tafahaona Aminy. Ny atao hoe MINO koa dia izay MIHAINO sy MIANATRA Aminy (and. 45): ny hoe “mihaino sy mianatra” eto dia midika hoe “manao ny fiainan’i Jesosy ho fiainana” ihany koa (ny atao hoe olona mahay dia izay manao ny zavatra ianarany ho fiainany).
Eto amin’ny texte izay anjarantsika ny hoe MINO koa dia “izay MIJERY Azy” (θεωρῶν, and. 40). Ny voambolana fototra nadika hoe “mijery” (θεωρέω) eto dia mifono ny hevitra hoe “mampiasa ny maso amin’ny maha “observer” na “spectator” kanefa voasarika handray anjara amin’ilay zavatra izay jerena”. Mifamatotra amin’ny hevitry ny matoanteny hoe “manatona, mihaino sy mianatra” izay efa nohazavaina teo ambony izany. Raha fehezina izany dia izao: Ny olona izay tena manatrika an’i Jesosy sy ny Asany ho azy dia voasarika hanam-pifandraisana amin’i Jesosy sy ny Asany. Voasarika handray anjara amin’ny fiainana mandrakizay izay iainan’i Jesosy sady atolony rahateo izay mino Azy. Izany rehetra izany no atao hoe “olona mino”.
Ny hanananao izany “fiainana mandrakizay” izany no nidinan’i Jesosy sy nanatanterahany ny asa izay nanirahan’ny Ray Azy tampony teo amin’ny hazofijaliana. Ny hanangana anao amin’ny maty ka hiainanao izany mandrakizay no hiaviany fanindroany. Aza mba ho isan’izay tsy mino ho amin’ny fahafatesana (fahaverezana) mandrakizay àry fa minoa an’i Jesosy Tompo sy ny asany dia ho avy hanangana anao sy hampiaina anao izany fiainana mandrakizay araka izay iainany izany Izy.
Ho Azy irery ihany anie ny voninahitra mandrakizay. Amena!